भीमगीठे माध्यमिक बिद्यालयमा श्रोतकेन्द्र स्तरीय प्रतियोगितात्मक कार्यक्रम सम्पन्न ! – ebaglung.com
भीमगीठे माध्यमिक बिद्यालयमा श्रोतकेन्द्र स्तरीय प्रतियोगितात्मक कार्यक्रम सम्पन्न !
२०७५ भाद्र २६, मंगलवार ०७:४५	Top News, थप समाचार
दिनेश शर्मा, बुर्तिवाङ २०७५ भदौ २६ । बडीगाड गाउँपालिका वडा नं ७ मा अबस्थित भीमगीठे माध्यमिक बिद्यालयमा श्रोतकेन्द्र स्तरीय प्रतियोगितात्मक कार्यक्रम सम्पन्न भएका छन् ।
बिद्यालयमा गठित शिर्जनशील बालक्लबको आयोजनामा सञ्चालित प्रतियोगितात्मक कार्यक्रम अन्र्तगत भएको भएको श्रोत केन्द्रस्तरीय हाजीरीजवाफ प्रतियोगितामा ५ टिमको सहभागीता रहेको थियो । जसमा भीमगीठे आदर्श एकेडेमी प्रथम , भीमगीठे माध्यमिक बिद्यालय व्दितीय तथा बुद्ध माबि खालकी मीनु पाइजा तिर्तीय भएका छन् ।
त्यस्तै गरी सोमबार भएको माध्यमिक बिद्यालय स्तरीय बाल अधिकार हाम्रो सरोकार भन्ने बिषयक बक्तृत्वकला प्रतियोगितामा ८ जनाको सहभागीता रहेकोमा भीमगीठे माध्यमिक बिद्यालयका मनसुन परियार प्रथम र सिद्ध माबि दर्लिङका गोकर्णराज थापा व्दितिय भएका छन् । प्रथम द्दितिय र तृतिय भएकालाई आकर्षक पुरस्कारको समेत ब्य्वस्था गरिएको थियो।
कार्यक्रममा बाल क्लबकी अध्यक्ष सिर्जना केसीको अध्यक्षता, बडीगाड गाउँपालिका वडा नं ७ का अध्यक्ष कृष्ण गुरुङको प्रमुख आतिथ्यता, श्रोत ब्यक्ती चिरञ्जीबी पौडेल र बिद्यालयका प्रअ सागर खरेलको उपस्थिती रहेको थियो । क्लबका सदस्य सपना केसीको स्वागत मन्तब्यबाट सुरु भएको कार्यक्रमको सञ्चालन बालक्लबका सचिब, प्रेम केसी, सदस्य मञ्जु पौडेल र स्मृति खत्रीले गरेका थिए ।
निर्णायक मन्डलमा श्रोत ब्यक्ती चिरञ्जीवी पौडेलको सम्योजकत्वमा मौसमकाजी क्षत्री र सुमित्रा घिमिरे रहेका थिए ।
कार्यक्रम बिधार्थीहरु प्रेम ब के सि, मन्जु पौडेल र स्मृति के सि ले सन्चालन गरेका थिए।
प्रकाश माध्यमिक विद्यालय हुन्द्रफेदीमा सामाजिक परिक्षण भेला सम्पन्न !